2016 मा थुमाको फिर्ती! | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
एक परमेश्वर, एक धरती, एक मान्छे।
परमेश्वरले « छ » र उहाँले ब्रह्माण्डको, पृथ्वी र मानिसको सृष्टि भनेर बाइबल बताउँछ।
यस वर्ष 2016 हामी हिब्रू पात्रो अनुसार हुनेछ, को 5777 औं परमेश्वरले मानिसजातिको सृष्टिको वर्ष।
मानवता tracing एक लाख भन्दा बढी वर्ष वैज्ञानिक छद्म-प्रमाण विरुद्ध के स्वीकार गर्न जान्छ।
भर इतिहास, बाइबल परमेश्वरको र मानवता बीच संघ को यो मुद्दा राख्न मानिसहरू सिकाइएको थियो।
हाय, बरु यो शिक्षा परमेश्वरको नजिक रही मानिस टाढा सार्न जारी छ।
बाइबल शिक्षाले तापनि धेरै गलतफहमियहरुलाई मानिसजातिको इतिहास भन्दा देखा छन्। त्यहाँ सूर्य उपासकहरू, चन्द्र र डरलाग्दो काल्पनिक देवताहरूका थिए। पुरुष पनि pharaohs उदाहरणबाट देवताहरूको रूपमा लाग्यो छन्।
तर आधुनिक संसारको मानिस परमेश्वरको पनि थप गर्ने अपमान थियो! मानिस केवल आफ्नो निर्माता अस्वीकार गरेको छ या बुरा मानिस यदि परमेश्वरले अवस्थित जस्तै कार्य।
परमेश्वरको आधुनिक मानिसको मनमा वर्तमान छैन त्यसैले, मानिस देवता बन्ने सपना गर्न थाले।
फ्रान्स Clovis र Joan चाप को बावजुद, यसको इतिहास (सेन्ट Bartholomew मा प्रोटेस्टेंट, चुडैल hunts, पक्राउ र Templars र Jeanne को executions को नरसंहार भर आक्रोश परमेश्वरको जारी छ चाप आदि ..) र फ्रान्स बल्ल 1789 क्रान्तिको समयमा राज्य परमेश्वरको जारी गरेको छ।
गणतन्त्र 1789 मा फ्रान्स को जीवन देखि परमेश्वरले ड्राइव चाहन्थे छ र जहाँ यो अन्ततः जान्छ हामी हेर्नुहोस्।
227 वर्ष पछि, फ्रान्स, बर्बाद छ आक्रमण र महत्वपूर्ण रूपमा स्वागत गर्ने छन्, सहायता, बसा, खुवाउनु यी छद्म-शान्तिपूर्ण आक्रमणकारिहरुमा आफ्नो सम्पत्ति को dispossessed, मुक्त हेरचाह र पनि हाम्रो कर द्वारा मासिक भुक्तानी!
यद्यपि फ्रान्सेली बाँच्न सम्भावना « गरिबी मा » एक अक्सर पीडादायी काम र भार को अल्प परिवार बजेट थप भारी, बावजुद « दुःखले मा » जब बेरोजगारी द्वारा मारे।
अवकाश तिनीहरूले निकै कष्टकर सामान्यतया लामो काम जीवन पछि दुःखले मा अनिश्चित मा सबै भन्दा राम्रो र खराब छन्।
फ्रान्सेली मान्छे stigmatized र जो संग तिनीहरूले सँगै बस्न सरकारको द्वारा बाध्य भए यी विदेशी आक्रमणकारिहरुमा फाइदाको लागि असुरक्षा र दुःखले गर्न निन्दा गर्दै हुनुहुन्छ।
यो प्रत्यक्ष सेट एक लागत छ र यसलाई धेरै पीडा यसलाई समर्थन गर्ने फ्रान्सेली मान्छे « कर, कर, शुल्क र शुल्क सधैं महत्त्वपूर्ण, जबकि सामाजिक लाभ फ्रान्सेली मान्छे ठूलो कठिनाई भएको बिन्दु गर्न कम हो उपचार।
राष्ट्रपति François Hollande, पनि छ आफ्नो पूर्व-Mistress पुस्तकमा कम से कम, तिनीहरूलाई नामकरण गरेर आफ्नो मान्छे अपमान: « यो toothless »।
, लज्जास्पद लज्जास्पद, अपमानजनक र अपमानजनक यो अभिव्यक्ति यसलाई सही फ्रान्सेली निको पार्न सक्नुहुन्छ त्यो सत्य हो किनभने, वास्तविकता को एक प्रतिबिम्ब तैपनि छ।
दन्त हेरविचार र dentures को लागत अक्सर गरिबी र दुःखले बस्ने मान्छे को लागि prohibitive छन्, र तिनीहरूले toothless जगतले अक्सर वास्तवमा छन्।
हो यी उपचार र dentures विरुद्धमा यी सबै विदेशी आक्रमणकारिहरुमा गर्न निःशुल्क!
हामी मसीहीहरू यो apocalyptic अवस्था हामीलाई नेतृत्व भनेर फ्रान्स जीवनमा परमेश्वरको अभाव छ भनेर बुझ्न।
र बुझ्न बनाउन, परमेश्वरले यी विदेशी « आक्रमणकारिहरुमा » लुसिफरको को धर्म हो चाहन्थे« इस्लाम। »
हामी हरेक दिन देख्न रूपमा हामी अन्त समयमा बाँचिरहेका छौं र तिनीहरूले हाम्रो प्रभु र राजा येशू ख्रीष्टको फिर्ती संग समाप्त हुनेछ।
म ठूलो आशा छ कि सेप्टेम्बर महिनाको वा अक्टोबर 2016 को महिनाको लागि यो फिर्ती
तर हामी म पहिले नै गलत छु भनेर चिन्नु पर्दछ र म यो समय म अझै पनि गलत छु कि बहिष्कार गर्न सक्दैन।
हाय, हामी केही दशक प्रभुको फिर्ती प्रतीक्षा हुन सक्छ।
दुखाइ सुरु भएको छ किनभने तर म आशा (कि अकाट्य छ) र तिनीहरूले देखि 29 सेप्टेम्बर 2008 ठूलो सेना संग प्रहार।
हामी पनि आफ्नो फिर्ती प्रसब को पीडा जस्तै हुनुपर्छ देखि येशू ख्रीष्टको महिमा मा फर्कन झन् worsen हुनेछ भनेर थाह छ।
त्यसैले दुखाइ प्रगतिशील छ र मात्र थप worsen गर्न सक्नुहुन्छ!
येशू ख्रीष्ट यस वर्ष 2016 फिर्ता भने, हामीले चाँडै जीवनको यी सबै पीडा मुक्त हुनेछन्। यो हाम्रो पाप, हाम्रो गल्ती, हाम्रा गल्ती, हाम्रो दुष्ट कामहरू र हाम्रो अशुद्ध विचार को लागि हरेक दिन माफी माग्दै प्रार्थना मार्फत परमेश्वरले सहभागिता रहन त्यसैले अत्यावश्यक छ।
हामी हाम्रो जीवनमा यी आक्रमणकारिहरुमा सहित मदतको लागि हामीलाई सोध्न गर्नेहरु मदत गरेर हाम्रो मसीही मान जोड मा छ।
तर हामी पनि हाम्रो संस्कृति, हाम्रो इतिहास, हाम्रो मान र हाम्रो देश फ्रान्स रक्षा गर्न छ।
युरोप मा हरेक देश हाम्रो भाषा, हाम्रो कथा र हाम्रो देशहरूमा भिन्न छन् भने, हाम्रो मसीही विश्वास सामान्य छ रूपमा आक्रमण गरिएको छ लागि म फ्रान्स लागि भन्न कि नोट मान्य छ।
म यो हाम्रो सरकारको कमजोरी सिरिया देखि बस आएको छैन भन्ने प्रस्थान मा सबै मानिसहरूका प्रोत्साहन तर विश्वभरिबाट युरोप र विशेष गरी फ्रान्स मा राम्रो जीवन खोज्न छ कि स्पष्ट गर्नुपर्छ।
येशू ख्रीष्ट को फिर्ती अघि अन्तिम दिन मानवता को toughest परिभाषा संग हुनेछ। हामी सबै यस वर्ष गरिन लागि, 2016 कडा प्रार्थना गर्नुपर्छ।
यो बप्तिस्मा मार्फत ख्रीष्टको जगतले सबैभन्दा ठूलो संख्या ल्याउन धेरै सानो समय छोड्छ।
यो पनि सायद त्यो बप्तिस्मा लागि परमेश्वरले तिनीहरूलाई युरोप मा पठाएको सबै प्रवासिहरु प्रस्ताव गर्न भएको छ। त्यसैले आफ्नो मदत माग्न गर्ने सबै बप्तिस्मा प्रस्तावित गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
परमेश्वरको चाहन्थे थियो भने, हामी प्रवासिहरु को सबै परिवार ठाउँमा हुन सक्ने विचार गर्नुहोस्।
नम्र रहन र हाम्रो पाप, हाम्रो गल्ती, हाम्रा गल्ती, हाम्रो दुष्ट कामहरू र हाम्रो अशुद्ध विचार बावजुद हामीलाई जान्छ कि प्रेम लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद।
हाय, येशू ख्रीष्ट आउँदै र पछि आफ्नो बदलामा सुस्त छ भने, त्यसैले हामी एक प्रमुख समस्या 2017 मा हुने छ।
यो फ्रान्स राष्ट्रपति चुनाव हुनेछ र आफ्नो विवेक मा प्रत्येक आफ्नो रुचि को उम्मेदवार को लागि मतदान गर्न जाने।
गणतन्त्र नै एक छाया छ र यसको सार्वभौमिकता निर्मूल गरिएको छ र यसको मुद्रा कि यो तैपनि सजग हुनुपर्छ।
प्रभाव र संसारमा फ्रान्स प्रभावमा देखि सामान्य डे Gaulle झन् périclitent।
केही यो अझै पनि अवस्थित छ भने तर अब सांसारिक छ र Koranic स्थायी बन्द र आक्रमण उल्ट्याउन, आउँदै वर्ष मा गर्न फ्रान्सेली अल्पसंख्यक मसीहीहरूले र गणतन्त्र हुनेछ गरिन्छ भने यो परिवर्तन पोल मा लोकतान्त्रिक हुनेछ।
अधिकारीहरूले मानिसहरूलाई सत्य बोल्न निषेध गरेको छ। त्यसैले कुनै तथ्याङ्कले आधिकारिक फ्रान्सेली मुस्लिम संख्या मा अवस्थित तर कसैले इस्लामी समुदाय झन् फ्रान्स र युरोप मा महत्त्वपूर्ण छन् कि हरेक छिमेकी मा, हरेक शहर मा देख्न सक्नुहुन्छ।
कुरा स्पष्ट छ, यी समुदाय महत्त्व विचलता छ!
इस्लामी प्रवास को यी LAX नीतिहरू यो विश्वास, ख्रीष्टियन र ख्रीष्टबाट टाढा सार्न हुनेछ पोल मा समर्थन।
न्यायाधीश र निन्दा प्रवासिहरु पनि विश्वास, ख्रीष्टियन र ख्रीष्टबाट टाढा उत्प्रेरित गर्नेछ।
तर दान भूल छैन आफूलाई सुरु र एक हामी स्वामित्व हुनुपर्छ।
त्यसैले जे आक्रमणकारिहरुमा यी सबै प्रवासिहरु हाम्रो निर्वाचित अधिकारीहरु गरेका निर्णय, निर्णय प्रेम र मसीही दान संग लागू सुनिश्चित हुनुपर्छ।
एक समयमा मानिसहरू यसो भन्दै परमेश्वरको अस्वीकार गर्दा « मानवतावादियों » तिनीहरूले आफ्नै भाग्य रूपमा अरूको भाग्य र आफ्नो प्राण को भाग्य बारेमा थप चिन्तित छन्।
यो राष्ट्रपति चुनाव, जो चुनाव बयान र प्रतिज्ञा पछि, प्रवासी प्रवाह युरोप भर र विशेष गरी फ्रान्स झाडू जारी कि यसकारण सम्भावना छ।
एउटै कारण सधैं Islamists पूर्व थिए, तिनीहरू यो युरोप मा के हुनेछ, त्यही प्रभाव उत्पादन।
हिंसा, गृहयुद्ध र धार्मिक युद्ध त्यसैले पक्कै पनि फ्रान्सेली राष्ट्रपति चुनाव पछि तीतो aftermath enliven हुनेछ। भने अघि !!!
सबै धर्म साँचो र परमेश्वरको प्रमुख बाटो रूपमा पहिचान सम्म, त्यसैले यसलाई हाम्रो भाइबहिनीको धेरै साँचो अर्थ राखिएको भनेर जो बुझन छ जहाँ पोप आफूलाई विश्वास गुमाएको छ संसार मा विश्वास झन् प्रतिबन्धित छ।
झन् हाम्रो स्वतन्त्रता बनेर पनि प्रतिबन्धित। चाँडै हामी पक्कै पनि छैन हाम्रो चर्च विरुद्ध र फ्रान्स भाइबहिनीको मा हिंसा र संसारको बाँकी विरुद्ध, हाम्रो मसीही विश्वास विरुद्ध सबै कार्यहरू निन्दा गर्नु गर्न स्वतन्त्रता हुनेछ।
त्यसैले मेरो प्रिय भाइबहिनीहरू, म ब्लग नाम को शीर्षक मा पहिलो ढोका दुई पुस्तकहरू लेखिएका छन्। « राजा को फिर्ती को प्रचारक » र उपशीर्षक « अन्धकार आउँछ प्रकाश » पहिलो भाग मा यो पुस्तक प्रमाणित गर्छ आफ्नो धेरै सिर्जनाहरू जो मानिस र के किन परमेश्वरको इच्छा पालन गर्न छनौट गर्नेहरूलाई को भाग्य हुनेछ परमेश्वर र अस्तित्व बताउँछन्। यस पुस्तकको दोस्रो भाग मेरो लेख केही समावेश म महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र मेरो इच्छा विरुद्ध ब्लग को एक सम्भव बन्द बचत गर्नुहोस्।
शीर्षक संग दोस्रो पुस्तक « फ्रान्स, सभ्यता र गणतन्त्र बाटो बिराएको » र जसको उपशीर्षक छ « राजा को धर्मप्रचारक रिटर्न » पहिलो भाग व्याख्या हामी धोका थिए कसरी र कथा लाइन धोका दासत्व मा समय को अन्त मा आफूलाई पाउन fatidiquement। यो पनि फ्रान्स यस लीक, बाहिर प्राप्त गर्न सक्छन् कसरी बताउँछन् « फ्रान्स राजा को एक फिर्ती, » येशू ख्रीष्टको फिर्ती केही दशकहरूमा गर्नुपर्छ भने। यस पुस्तकको दोस्रो भाग पनि मेरो लेख केही म पनि मेरो इच्छा विरुद्ध ब्लग को एक सम्भव बन्द बचत गर्न महत्त्वपूर्ण मानिन्छ समावेश गर्दछ।
हुन्छ जेसुकै होस्, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको फिर्ती हाम्रो पुस्तालाई, यो एक निरपेक्ष निश्चय छ! र यो एक शङ्का को छाया ग्रस्त छैन!
तर बाइबल पनि येशू ख्रीष्ट धरती देखि लगभग गायब भएको छ साँचो विश्वास फर्कन हुनेछ जब कि हामीलाई बताउँछ।
त्यसैले पनि म प्रतिफलको imminence र वर्ष 2016 को लागि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको मुस्तैदी को विश्वस्त छु, भन्ने तथ्यलाई म गलत हुन सक्छ कि रहिरहन्छ र दुवै पुस्तकहरू पक्कै पनि तपाईंलाई मदत गर्नेछ भन्ने मात्र परमेश्वरको थाह किनभने के शत्रुहरू विश्वासको सक्षम छन्।
हामी देख्न र 2008 देखि मसीहीधर्म नरक मा descended छ पालन। भाइबहिनीको हाम्रो निर्वाचित अधिकारीहरु को सामान्य भावशून्यता मा विश्वव्यापी हत्या गरिन्छ। हामी इस्लाम ख्रीष्टियनहरूलाई युद्ध छेडा भन्ने पत्ता लगाउन।
अमेरिकी मा गिरजाघर सेन्ट पैट्रिक मा सेप्टेम्बर 27, 2015 पोप फ्रान्सिस पनि अस्वीकार गरेको छ येशू ख्रीष्ट को एक सरकारी घोषणा बराबर क्याथोलिक चर्च को मृत्यु पोप फ्रान्सिस थिए जो गरेको पहिले नै समारोह को विशेषताहरु इन्कार जब मार्च 13, 2013 नियुक्त पोप।
हामी थप समय, अधिक हामी बित्दै भनेर पत्ता लगाउन « मसीहीहरूले » बाहिर singled र डक राख्नु छन्।
गाढा दिन अगाडि, त्यसैले म प्रारम्भिक मसीहीहरूले रूपमा आवश्यकता द्वारा बुद्धिमान सभा वा गोप्य तयारी गर्न उपयोगी हुनेछ भन्ने दुई पुस्तकहरू लेख्न निर्णय वा तपाईं पनि प्रभुको फिर्ती सम्म फेरि evangelize गर्न सक्छन् र।
यो आवश्यक छैन कि आशा तथापि, र यो समय राम्रो छ भनेर र येशू साँच्चै फिर्ता सेप्टेम्बर वा अक्टोबर को महिनाको लागि यो वर्ष 2016 छ, म बीच तुरही को भोज को अवसरमा लाग्छ 03 र अक्टोबर 4।
म समय को बाइबलीय अन्त को अन्तिम हप्ता ब्लग व्याख्या, सात वर्ष को एक अवधि दानियल येशू ख्रीष्टको आगमनको पहिलो अघि केही 600 वर्ष अगमवक्ता भविष्यवाणी गरिएको थियो।
गत सात वर्ष समय को अन्त बन्द गर्न, परमेश्वरको दण्ड छ। यो भविष्यवाणी मा भने यो सात वर्षको अवधिमा दोस्रो साढे तीन वर्ष समयमा दुई पटक र तीन आधा वर्ष र को हुन्छन् भनेर छ, दुखाइ धेरै brighter हुनेछ।
म मेरो लेखमा घोषणा येशू ख्रीष्टलाई मे 14 या 15 सेप्टेम्बर 2015 को फिर्ती! तुरही को भोजमा समयमा येशू ख्रीष्टको फिर्ती, म 29 स्थित सेप्टेम्बर 2008 को शुरुवात वल स्ट्रीट को शेयर बजार दुर्घटना निम्न कष्ट को सात वर्ष को अन्त मा हस्तक्षेप गर्न थियो किनभने शक्ति छ तब देखि येशू ख्रीष्टको प्रतिफलको सबै heralding संकेत र भविष्यवाणीहरू बढी शक्ति र परिमाण संग निरन्तर छन् भनेर याद गर्न।
हाम्रा प्रभु को फिर्ती सेप्टेम्बर वा अक्टोबर 2015 मा हस्तक्षेप गर्न अनि अझै हामी सबै यो गलत थियो भन्ने पाइन्छ थियो। यद्यपि दुखाइ वास्तविक र पछि 29 सेप्टेम्बर 2008 बढ्दै थियो।
त्रुटि म भविष्यवाणी दुई पटक साढे तीन वर्ष उल्लेख कि खातामा लिएर छैन द्वारा लाग्छ।
मैले बल्ल भविष्यवाणी दुई पटक साढे तीन वर्ष यसो भने साढे तीन वर्ष दुई अवधि बीच मरेको समय हो भनेर बुझे।
स्पेनी भाषा भिडियो: पहिलो अवधि यसलाई disproportionate र अनपेक्षित थियो दुर्भाग्य उपेक्षा गरिन्छ कि स्वर्गमा एउटा ठूलो चिन्ह द्वारा मार्च 2012 मा समाप्त भयो।
तीन दोस्रो भाग र आधा पोप फ्रान्सिस को नियुक्ति मेरो विचारमा सुरु 13 मार्च 2013 र यो पीडा जारी र सबै क्षेत्रमा झन् worsen हुनेछ स्पष्ट छ।
तीन र मार्च 13 पछि आधा, 2013 हाम्रो सेप्टेम्बर 13, 2016 मा ल्याउँछ!
त्यसैले, हामी स्वीकार गर्न हिम्मत गर्नुपर्छ। येशू ख्रीष्ट को फिर्ती घोषणा गर्न बाइबलमा उल्लेख गरिएका सबै लक्षण र भविष्यवाणीहरू विश्लेषण धरती मा हामी बाँचिरहेका छौं भनेर सबै प्रकारका घटनाहरूको लामो सूची प्रकट गर्छ।
व्याख्या बिना प्रकोप, भूकम्प, आगलागी, मुसलधारे वर्षा, आँधीबेहरी हुर्रिकानेस, प्रस्थान, महामारी, अनिकाल, हिंसा, युद्ध र युद्ध को अफवाहहरु, आतंकवाद, मान हानि, माछा, चरा र वन्यजन्तु र पशुधन को असंख्य मृत्यु दैनिक हुन् ग्रह र मानवता को जीवन। यी घटनाहरू प्रभु र राजा को फिर्ती घोषणा गर्न भविष्यवाणी थिए, येशू ख्रीष्ट एक हजार वर्षसम्म पृथ्वीमा शासन आउने परमेश्वरको मात्र छोरा प्रलय सम्म आउन।
हो अनौठो यसलाई लाग्न सक्छ रूपमा हामी सायद हाम्रो निर्माता पूरा गर्दै हुनुहुन्छ।
म सतर्क हुन चाहनुहुन्छ र शायद भन्न र म त्रुटि रूपमा अझै शायद एक पटक हुँ भनी स्वीकार।
म पहिले नै थाहा र त म admitting गलत हुन सक्छ मा कुनै लाज छ एक अगमवक्ता छैन।तथापि, येशू ख्रीष्टले हामीलाई संकेत बाँकी भने हामीलाई हेर्न र हामीलाई बल र समय को अन्त गर्न सम्बन्धित कठिनाइ हटाउन आवश्यक आशा दिने बेला प्रतीक्षा गर्न छ।
त्यो हाम्रो प्रभुको फिर्ती सुसमाचार छ।
तर यदि राम्रो समाचार छ, त्यहाँ पनि नराम्रो समाचार छ कि कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ।
पहिलो नराम्रो समाचार आउँदै महिना हामी येशू ख्रीष्टको फिर्ती को दिन को धेरै नजिक र अन्तिम दिन मुश्किल हुनेछ नेतृत्व रूपमा साह्रै गाह्रो हुन जाँदैछन् छ। तिनीहरू परमेश्वरको क्रोधको दिनको समय हुनेछ।
यो यसकारण क्षमा र पश्चात्ताप सोधेर प्रार्थनामा धेरै लगनशील हुन आउँदै महिनामा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। पछि यो राम्रो तरिकाले ढिलो हुन सक्छ !!!
दोस्रो खराब समाचार मलाई थाहा छैन चर्चका र्याप्चर अन्तिम मिनेट वा परमेश्वरको क्रोधको दिनको समय अघि हुनेछ भने कि छ।
मेरो प्यारो भाइबहिनीहरू प्रार्थना हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको फिर्ती दुखाइ हामी धेरै को लागि थप असह्य हुनेछ किनभने ढिलाइ लाभ छैन भनेर।
तर हामी मेरो विश्लेषण को शुद्धता बाबजुद हुन सक्छ केही वर्ष म माफी हाम्रो प्रभुको फिर्ती र अग्रिम प्रतीक्षा गर्न पुगे।
प्रभुको तरिकाहरू छन्, र म पाएँ, अक्सर impenetrable!
हामी केही दशक प्रतीक्षा छ भने यो धेरै गाह्रो हुनेछ र म ख्रीष्टको शत्रु को अनुयायीहरूको झूट तिनीहरूले देखा भन्दा धेरै ठूलो हो भन्ने तथ्यलाई आफ्नो ध्यान आकर्षित, र म हेर्न तपाईं आमन्त्रण यो ब्लग पृष्ठ मा यो भिडियो: » यहाँ « हामी पृथ्वीको उमेर मा उमेरका लागि सहन झूटले को परिमाण को एक विचार प्राप्त गर्न।
प्रिय भाइबहिनीहरू ख्रीष्ट येशूमा म दुई संस्करणहरू Edilivre मेरो पुस्तकहरू आदेश आमन्त्रण।
परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष र तपाईं हामी परमेश्वरको उसलाई येशू ख्रीष्ट र सुराकी लगाया कि शान्ति, न्याय, दया र नम्रता को दायाँ र प्रेम को सद्गुणको बाटो, राख्नुहोस्।
मानवता के पाउँछन् को एक राम्रो समझ लागि, म तपाईंलाई मेरो लेख पढ्न आग्रह सेप्टेम्बर या अक्टोबर 2016 येशू ख्रीष्टको फिर्ती
तुरही यहूदी भोजमा 03 र अक्टोबर 4, 2016 मा आयोजना गर्न धरती को अनुहार मा हामीलाई सबै चकित गर्नुपर्छ …. !
ब्याट एक, 2nd तल
यस लेखमा बन्द, म टेलिभिजनमा याद को त्रास अझै पनि बेल्जियम मा बम विस्फोट थुप्रै परिवार मारा थियो।
म यहाँ मेरो गहिरो दुःख पुष्टि र सिकार र आफ्नो परिवारको लागि प्रार्थना गर्न ख्रीष्टमा सबै मेरो प्रिय भाइबहिनीहरू आमन्त्रण।
यी despicable प्रेरित हामीलाई आतंककारीहरूले तिनीहरूले अल्लाह कल एक परमेश्वरको नाउँमा आफ्नो वध पूरा भनेर बुझ्न बनाउन तर घृणा सुन्न छैन!
इस्लाम लुसिफरको को धर्म हो र यसको शुरूआत पछि देखि Islamists हातमा प्रेम हतियार कुरा!
र पोप सबै धर्म साँचो हुन् र तिनीहरूले पनि परमेश्वरको बाटो हो भनेर कायम भन्न!
येशू ख्रीष्टले यसो भन्नुभयो भनेर एक पल को लागि भूल छैन :
« म बाटो सत्य र जीवन हुँ; कुनै एक पिताको तर मलाई द्वारा आउँछ! «
परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष।